IMuroexe, uphawu lwaseSpain olunqoba kunye noyilo lwayo kunye nezinto | Amadoda aQinisekileyo
Amadoda aQinisekileyo | | I zihlangu
Namhlanje sikulethela iHombresconestilo.com uphawu olukhethekileyo kwaye yenye yezo sizithandayo kakhulu kwinqanaba loyilo kunye nezinto ezintsha ezinemathiriyeli kunye noburhabaxa obubaleka ngokwesiko. Igama lakhe ngu Muroexe kwaye ngaphandle kwento onokucinga ngayo kwimbonakalo yokuqala, yi Inkampani yaseSpain ngubani okwazileyo uku qalisa kwicandelo elingahambi njengezihlangu. Iimodeli zayo zisekwe kuyilo oluncinci, izinto ezintsha, ukukhanya okugqithileyo ukufezekisa ingqibelelo yezihlangu ezisezidolophini phakathi kwezihlangu kunye neeteki kunye nokuchukumisa okucacileyo. Ubuchwephese obuphezulu Kuyamangalisa uwonkewonke ngaphezulu kweeyunithi ezingama-250.000 ezithengisiweyo ukuza kuthi ga ngoku.
Nangona zabo Iimveliso zeenkwenkwezi zezihlangu kunye neeteki, uphawu luphinde lusinike ezinye iimveliso ezinje ngeebhutsi, iimbadada kunye nezinye izinto ezinje ngoobhaka, iibhegi, ... zonke zinesimbo seMuroexe esimiselweyo: uyilo oluncinci kunye nezinto ezinokuyilwa.
Ukuze usondeze kwezinye zeemveliso kwikhathalogu yayo, uphawu lusibonelele ngalo Imodeli emi-3 yeziteki kunye nezihlangu esiza kubona ngezantsi.
1 IMarathon Nebula Osaka
2 IHybrid Asteroid White
3 I-Atom yeGravity Metric
4 Iinkonzo kunye neengozi zeemveliso zabo
5 Ezinye iifoto zeMuroexe
IMarathon Nebula Osaka
El IMarathon Nebula Osaka Ngenye yeemodeli zeMuroexe eziphakathi kwesihlangu nesihlangu. Uyilo ngokubonakalayo luhle kwaye alunangqondo, kodwa wakuba ubeke ukukhanya kunye nokuguquguquka kwezixhobo eyakhiwe ngayo isenza sizive ngathi sinxibe iiteki ezitofotofo. Isihlangu sakhiwe ngelaphu eliphefumlelweyo elikuvumela ukuba uzinxibe kwezona ntsuku zishushu ngaphandle kwengxaki kwaye ngenxa yememori ye-ergonomic foam insole ilungelelanisa iinyawo zakho njengeglavu. Ukuphela kwe-EVA (esetyenziswa kwizihlangu ezibalekayo) kukhetho olufanelekileyo lokufezekisa imveliso ekhanyayo kunye nokusebenza kakuhle.
Esi sisihlangu esifanelekileyo unxibe kakuhle kwaye unyamezele iintsuku zokusebenza nzima kodwa ukugcina i inkangeleko entle.
Ixabiso layo loqobo yi- $ 80 kodwa ngoku Ungazifumana zithengiswa nge-35 Euro kuphela ngokunqakraza apha.
IHybrid Asteroid White
IHybrid Asteroid White Yimodeli engena ngamehlo, okanye uyathandana okanye awuyithandi kodwa kunzima kuwe ukuba ube noluvo oluphakathi. Ityala lethu lelokuqala, kubonakala ngathi a Imodeli entle enoyilo lokwenyani lomhlaba kunye noyilo ngenxa yobuncinci bayo.
Ngaphandle kwayo nayiphi na i-seams ebonakalayo, imveliso yenziwe ngesikhumba sokwenziwa kwesikhumba kwaye, njengoko kuqhelekileyo kwiimveliso zeMuroexe, kukhanya kakhulu. Kwinqanaba le-insole kunye ne-insole, isebenzisa izinto ezifanayo njengemodeli yangaphambili: i-EVA yodwa ukubonelela ngezemidlalo ngelixa ugcina ubuhle bayo bonke kunye ne-insole ergonomic insole. i-foam yememori.
Ukuba yimveliso emhlophe ngokupheleleyo, olunye uloyiko lwethu lokuqala kukuba iya kudyobha ngokulula kwaye kube nzima kakhulu ukuyicoca. Inyani yile yokuba ulusu lokwenziwa luyinto ingcolile imdaka kunokuba inokubonakala ekuqaleni kwaye icocwa ngokulula ngelaphu elifumileyo ngesepha encinci.
Ixabiso layo loqobo yayiyi- € 75 kodwa ngoku ungayithenga nge-50 Euro kuphela ngokunqakraza apha.
I-Atom yeGravity Metric
Umtyibilizi I-Atom yeGravity Metric Yindaleko yeAtom, eyona modeli iphumeleleyo yohlobo kunye neyenze ukuba yoyise intengiso kwiminyaka embalwa edlulileyo. Yenziwe ngesikhumba sokwenza izinto esingangeni manzi kwaye ifumaneka ngemibala emi-5 eyahlukeneyo Yonke incasa. Inye irabha, enikezela ukubambelela okuhle kwiimeko zamanzi nangona isenza ubunzima buphakame kunezinye iimodeli esiye sazivavanya ukusuka kuhlobo. Njengazo zonke iimodeli, iza ixhotyiswe nge-ergonomic memory foam insole elingana neglavu kulunyawo lwakho.
Imodeli entsha yeAtom Unayo onayo nge- € 80 ngokunqakraza apha.
Iinkonzo kunye neengozi zeemveliso zabo
Njengoko sinokubona kwiimveliso esizijongileyo, iMuroexe yinkampani ekubheja ngokucacileyo kuyo uyilo oluncinci kunye neyona teknoloji ye-avant-garde kwicandelo lezihlangu. Iimveliso zabo zicocekile, zicocekile, ziphantse zazingenamthungo kwaye zintle kakhulu; Bamele inqaku eliphakathi phakathi kokuthuthuzelwa kwesihlangu kunye nesimbo sesihlangu, ukulawula ukubonelela ngeyona nto ibalaseleyo kwilizwe ngalinye. Into yokuqala ekubethayo kukukhanya kwazo, ngaphezulu kwazo naziphi na izihlangu onazo ekhaya kunye nendlela ekhululeke ngayo imemori ye-foam insole xa ilungisa imilo yonyawo lwakho. Kwaye zikulungele ukunxiba, sizibekile kwimini yonke ngaphandle konyawo oluncinci.
Njengokuphela kwento echaseneyo, ilaphu lemodeli yeMarathon yeNebula Osaka liguquguquka ngokugqithileyo elenza ukuba imodeli ikhubeke ngokulula elunyaweni kwaye ijongeke ingathandeki emva kweentsuku ezininzi zokusetyenziswa.
El ukupakisha lelinye lamanqaku awomeleleyo kwiimveliso zalo. Ukufumana kunye nokuvula imodeli yeMuroexe ngamava Enkosi kwibhokisi yayo enononophelo, umgangatho wezinto ezisemgceni ezikhumbuza kakhulu iimveliso zeApple.
Ngokumalunga nexabiso, ixabiso lemali lilungile, ngakumbi ukuba uthatha ithuba lokubonelelwa kweemodeli ezithengisiweyo.
Ezinye iifoto zeMuroexe
Apha ngezantsi sikunika uluhlu lweefoto zemodeli zeMuroexe esizihlalutyeyo kweli nqaku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » fashion » I zihlangu » IMuroexe, uphawu lwaseSpain oloyisayo loyilo lwayo kunye nezinto zalo
Izinto ezichaphazela impilo